လေဖိအားနည်းဆဲလ် « MMWeather Information BLOG
Leaveacomment MODEL-FORECAST, ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက်, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, လေဖိအားနည်းဆဲလ်, လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်သို့ တစ်ကြော့ပြန်ဝင်ရောက်လာသည့် INVEST 91W မုန်တိုင်းဖြစ်လာဦးမည်
By mmweather.ygn, on August 25th, 2013%
ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်၊ မြန်မာစံတော်ချိန် ၂၄း၃ဝ နာရီတွင် စတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း NRL မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့သည့် လေဖိအားနည်းဆဲလ် 91W သည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းအား ဇူလိုင် ၂၇ ရက်ည ပိုင်းတွင် ဖြတ်ကျော်ပြီး တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ ဇူလိုင် ၂၉ ရက်၌ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်တွင် အရှေ့ဘက်သို့ ပြန်လည်ချိုးကွေ့ခဲ့ပြီး ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း Luzon ကျွန်းအား မနီလာမြို့ပေါ်မှ ဖြတ်သန်းကာ ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်မှတစ်ဆင့် ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ပိုင်းသို့ ရောက်ရှိကာ သြဂုတ်လ ၂၂ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ဝ၆း၃ဝ နာရီ၌ လေဖိအားနည်းဆဲအဖြစ် ပြန်လည် အသက်ဝင်လာပြီး (ပုံ-၁) တွင်ဖေါ်ပြထားသည့် လမ်းကြောင်းအတိုင်း ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်တောင်ပိုင်းသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါသည်။
91W သည် . . . → Read More: ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်သို့ တစ်ကြော့ပြန်ဝင်ရောက်လာသည့် INVEST 91W မုန်တိုင်းဖြစ်လာဦးမည်
One comment MODEL-FORECAST, မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ 91W, LPC, ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်, လေဖိအားနည်းဆဲလ် လေဖိအားနည်းဆဲလ် 91B ပိုမိုအားကောင်းပြီး မုန်တိုင်း ဖြစ်လာနိုင်
မေလ(၄)ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၆နာရီခွဲမှာ အသစ်ထွက်လာတဲ့ NAVGEM Model ရဲ့ လေဖိအားနည်းအဆင့်မှာသာ ရှိသေးတဲ့ 91B အတွက် ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ ဒီမော်ဒယ် တွက်ချက် ခန့်မှန်းမှုမှာ မုန်တိုင်း ဗဟိုဖိအားကို ကြိုတင် ခန့်မှန်းတွက်ချက်ပုံဖေါ်ထားပြီး မုန်တိုင်း အရှိန်ကြောင့် ၆ နာရီအတွင်း ရွာသွန်းနိုင်မဲ့ မိုးရေချိန်ကို မီလီမီတာနဲ့ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
ပုံ(၁) – ယနေ့ ခန့် မှန်းချိန်မှ လာမည့် ၄၈ နာရီ (Tau 48) – မေလ (၆) ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့ လည် ၁၂း၃ဝ နာရီမှာ လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်းအဖြစ် စတင် ရောက်ရှိနိုင်မယ်လို့ ခန့် မှန်းထားပါတယ်။ . . . → Read More: လေဖိအားနည်းဆဲလ် 91B ပိုမိုအားကောင်းပြီး မုန်တိုင်း ဖြစ်လာနိုင်
Leaveacomment မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ, လေဖိအားနည်းဆဲလ် 91B, Bay Of Bengal, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, လေဖိအားနည်းဆဲလ် လေဖိအားနည်းဆဲလ် INVEST 91B အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ရွေ့လျား
မေလ (၄)ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၆ နာရီခွဲ အချိန်တွင် ရရှိသည့် NRL Data များအရ လေဖိအားနည်းဆဲလ် (INVEST)91B သည် လွန်ခဲ့သည့် ၆ နာရီအတွင်း အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီ မိုင် ၂ဝ နှုန်းခန့်ဖြင့် ရွေ့လျားခဲ့ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ နောက်ဆုံးရရှိသည့် အချက်အလက်များအရ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ကိုလံဘိုမြို့၏ အရှေ့-အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၄၂ဝ ခန့်၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုကိုးကျွန်းလေဆိပ်၏ အနောက်တောင်ဘက် ၈၅၅ မိုင်ခန့်၊ ပုသိမ်မြို့ အနောက်တောင်ဘက် ၁ဝ၅၅ မိုင်ခန့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အနောက်တောင်ပိုင်း ပင်လယ်ပြင်တွင် ဆက်လက် တည်ရှိနေပါသည်။
INVEST 91B သည် ဗဟိုဖိအား ထပ်မံ ကျဆင်းမှု မရှိသော်လည်း တိမ်ထုစုဖွဲ့မှု . . . → Read More: လေဖိအားနည်းဆဲလ် INVEST 91B အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ရွေ့လျား
Leaveacomment မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ, လေဖိအားနည်းဆဲလ် 91B, Bay Of Bengal, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, လေဖိအားနည်းဆဲလ် လေဖိအားနည်းဆဲလ် 95B အာရေဗျပင်လယ်သို့ ရောက်ရှိ
By mmweather.ygn, on October 21st, 2012%
အိန္ဒိယနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းစွန်း နှင့် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ အနောက်ဘက် လက္ကာဒိုက် ပင်လယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် လေဖိအားနည်းဆဲလ် 95B သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းစွန်း တမီလ်နာဒူးနှင့် ကီရာလာ ပြည်နယ်များကို ဖြတ်ကျော်ပြီး အာရေဗျပင်လယ်သို့ ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်း အောက်တိုဘာ ၂၀ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၂၄၃၀ နာရီတွင်ရရှိသည့် NRL data များအရ သိရပါသည်။ လေဖိအားနည်းဆဲလ် 95B သည် ကီရာလာပြည်နယ်၊ ကိုချီမြို့ အနောက်ဘက် မိုင် ၁၁၀ ခန့် ပင်လယ်ပြင်တွင် ဆက်လက် တည်ရှိနေပြီး အနောက်ဘက်သို့ ရွေ့လျားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
. . . → Read More: လေဖိအားနည်းဆဲလ် 95B အာရေဗျပင်လယ်သို့ ရောက်ရှိ
Leaveacomment မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ, လေဖိအားနည်းဆဲလ် 95B, LPC, လေဖိအားနည်းဆဲလ် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် တောင်ပိုင်းမှ လေဖိအားနည်းဆဲလ် 95B ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲ
Leaveacomment ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေ, မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ 95B, LPC, လေဖိအားနည်းဆဲလ် သီရိလင်္ကာအရှေ့ဘက်တွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ် 95B ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိ
By mmweather.ygn, on October 19th, 2012%
အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်၊ မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၀၆၃၀ နာရီတွင် ရရှိသည့် NRL data များအရ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်း၊ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ကိုလံဘိုမြို့ အရှေ့ဘက် ၈၅ မိုင်ခန့် ပင်လယ်ပြင်တွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ် 95B သည် အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက် ည သန်းခေါင်အချိန်ခန့်မှ စတင်ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိကြောင်း သိရပါသည်။
95B သည် လွန်ခဲ့သော ၆ နာရီက အနောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီလျှင် ၁၀ မိုင်နှုန်းခန့်ဖြင့် ရွေ့လျားခဲ့ပြီး၊ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှ အိန္ဒိယနိုင်ငံ အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းနှင့် အာရေဗျပင်လယ်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားနိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။
95B 19 Oct 2012 0000Z Location: 6.3 78.8 Winds: 15 . . . → Read More: သီရိလင်္ကာအရှေ့ဘက်တွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ် 95B ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိ
Leaveacomment မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ 95B, LPC, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, လေဖိအားနည်းဆဲလ် Older Entries »